भारतको अहिलेसम्मको रेकर्ड तोड्ने अक्षय कुमारको लक्ष्मी बम फिल्ममा आखिर के छ ?:: Naya Nepal
भारतको अहिलेसम्मको रेकर्ड तोड्ने अक्षय कुमारको लक्ष्मी बम फिल्ममा आखिर के छ ?
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारका फ्यानहरुका लागि एकदमै खुःशीको खबर आएको छ । अक्षय कुमाचार चाँडै नै लक्ष्मी बम फिल्ममा देखा पर्ने छन् । अक्षयसँग लक्ष्मी बममा कियारा आडवाणी महत्वपूर्ण भूमिकामा देखिने पक्का भएको छ ।
फिल्मको ट्रेलर ९ अक्टुबरमा रिलीज भएको छ । ट्रेलर रिलीज हुने बित्तिकै यो सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय भयो । यस ट्रेलरको रिलीजको २७ घण्टा भित्र ७ करोड भन्दा धेरै मानिसहरूले हेरिसकेका छन् ।
बलिउड अभिनेता तुषार कपूरले ट्रेलरको ७ करोडभन्दा बढी भएकोमा खुःशी हुँदै पोष्ट सेयर गरेका छन् । उनले पोस्ट साझा गर्दै भने, ‘लक्ष्मी बमको ट्रेलरलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद । यसलाई भारतमा २४ घण्टामा सबैभन्दा धेरै हेरिएको ट्रेलर बनाउनु भएकोमा पनि ।’
ट्रेलरमा अक्षय कुमार आफ्नी श्रीमती कियारा आडवाणीसँगै परिवार उनको घर जान्छन् । त्यसबेलादेखि त्यहाँ किन्नरको आत्माको नाटक सुरु हुन्छ । जहाँ अक्षयले सबैलाई आफ्नो कमेडीसँगै हसाँउछन् । तर जब किन्नरको आत्मा अक्षयभित्र पस्छ तब उनले मानिसहरूलाई तर्साउन थाल्छन् । अक्षयले बांग्रा लगाउनु र केटीको जस्तै लुगा लगाउनु र उनीहरूले जस्तो हाँस्नु पनि डरलाग्दो दृश्यको रुपमा रहेको छ ।
बलिउड सेलिब्रेटीहरूले पनि फ्यानहरूसँग लक्ष्मी बमको ट्रेलर मनपराएका छन् । टाप्सी पन्नू, कृति सनन भूमि पेडनेकर, करण जोहर, वरुण धवनलगायतका धेरै कलाकारले फिल्मको ट्रेलरको प्रशंसा गरेका छन् । लक्ष्मी बम तमिल फिल्म मुनि २ः कन्चनाको हिन्दी रीमेक हो। फिल्म डिस्ने प्लस हटस्टारमा ९ नोभेम्बरदेखि रिलीज हुँदैछ ।
अक्षय कुमारको साथ लक्ष्मी बममा कियारा आडवाणी, तुषार कपूर, शरद केलकर र अश्विनी कलसेकर देखा पर्ने छन् । यो फिल्म राघव लरेन्स द्वारा निर्देशित गरिएको हो ।
बिग बोसका चर्चित अनूप र जसलीनको विवाहको तस्विरले दुनियाँभर सनसनी, के हो वास्तविकता ?
शनिवार २४ असोज, २०७७
काठमाडौं । भारतका एक जोडिलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा सुरु भएको छ । बिग बोस प्रतिस्पर्धी अनूप जलोटा र जसलीन मथारुको जोडि बिग बोसको सीजन १२ मा देख्न पाइएको थियो । दुबैले बिग बोसको घरमा एक जोडीको रूपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यो बेला उनीहरुको जोडि उमेर अन्तरका कारण चर्चामा रहेको थियो ।
अब यो जोडी फेरि एक पटक चर्चाको हिस्सा भएको छ । जसलीन मथारूले विवाह जोडीका रुपमा अनूप जलोटासँगको तस्विर इन्स्टाग्राममा साझा गरेकी छिन् । यो तस्विर भाइरल भइरहेको छ र फ्यानहरूले उनीहरू दुवैले विवाह गरेको अनुमान गरिरहेका छन् । अब भजन सम्राट अनूप जलोटाले एक अन्तर्वार्तामा आफु ३५ बर्षको भए पनि उनले कहिल्यै जसलीनसँग विवाह नगर्ने दावा गरेका छन् ।
टाइम्स अफ इण्डियालाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा अनूप जलोटाले भने, “मैले ‘वो मेरी स्टूडेन्ट है’ फिल्ममा काम गर्न मात्र पैसाको लागि हुन्छ भनेको थिँए । यस चलचित्रमा काम गर्नका लागि मैले राम्रो पैसा कमाइरहेको थिएँ ।’ मान्छेको मनमा उब्जेका शंका हटाउनको लागि अब आफुले उक्त फिल्म नगरेको उनले जानकारी गराए ।
उनले भने, “जब म जसलीनलाई माया गर्दिनँ म कसरी विवाह गर्न सक्छु ? अफवाहहरू बनाउन चाहने मानिसहरू बनाउनुहोस् । म सबैलाई आफ्नो कुरा चिच्याउदै राख्ने छैन । मैले यो फिल्म केवल राम्रो पैसा कमाउनको लागि गरेको छु । यसमा केहि गलत छ ?”
जसलीन मेरो विद्यार्थी हुन् । उनका बुबा केसर मथारुले फिल्म निर्माण र निर्देशित गर्दैछन् । सिनेमाघरमा फिल्मको रिलीजको बारेमा अनूप जलोटालाई सोध्दा उनले भने, “किन छैन ? यो राम्रो कथा हो । म तपाँईलाई भन्न सक्छु यस फिल्ममा कतै मेरो र जसलीनको प्रेम सम्बन्धको बारेमा देखाइएको छैन, यदि कसैलाई शंका छ भने ।”
अनूप जलोटाले जसलीन उनको विद्यार्थी भएको स्पष्ट पारेका छन् । फिल्मको फोटो बाहिर आइसके पछि आफुसँग जसलीनको विवाहको सन्देश पाउन थालेको पनि उनले जानकारी गराएका छन् । उनी त्यसरी हल्ला फैलाउनेहरुलाई खुसी रहनुहोस् भन्छन् ।
जब अनूप जलोटालाई तपाईंको सन्देशको मतलब केहि पनि जाँदैन ? भनेर जिज्ञासा राखिएको थियो । त्यसको जवाफमा हाँस्दै उनले भने, “फरवार्ड सन्देशमा विश्वास गर्नेहरुलाई म के भन्न सक्छु ? जसले मलाई तपाईं र जसलीन विवाहित हुनुभएको हो भनेर सोध्नछन् उनीहरुलाई म स्पष्ट बताउँदैछु ।”
अनूप जलोटालाई सोधिएको थियो कि यदि तपाईं ३५ वर्षको हुनुहुन्थ्यो भने के तपाईं जसलीनसँग विवाह गर्नुहुन्थ्यो ? यसको जवाफमा, उनले भने, “अहँ, म उसँग कहिल्लै पनि विवाह गर्दिन । उसको आधुनिक र ग्लैमरस ड्रेसिङ्ग शैली मेरो घरमा मनपर्दैन ।’ उनले आफुहरु धोती कुर्ता लगाएर भजन गाउने व्यक्ति भएकाले जसलीनको फेशनसँग नसुहाउने उल्लेख गरेका छन् ।